Puntland & Jubbaland oo abaabulaya dagaallo lagu baajinayo doorashada Somaliya! | HalQaran.com
Home Opinion Puntland & Jubbaland oo abaabulaya dagaallo lagu baajinayo doorashada Somaliya!
Ilo wareedyo xog ogaal ah ayaa sheegaya in isbahaysiga maamul goboleedyada Puntland, Jubaland iyo mucaaradka Soomaaliya ay ka caga jiidayaan ka qayb qaadashada doorashada 2020/21.
Isbahaysigan ayaa ku andacoonaya in mucaaradku aysan haysan qof la tartami kara Farmaajo, haddii doorashadu ku dhacdo waqtigii iyo qaabkii loo qorsheeyayna uu Farmaajo si sahlan ugu guulaysan doono doorashada.
Si taas looga hor tago ayaa Deni iyo Madobe ku heshiiyeen in Puntland iyo Jubaland ay huriyaan dagaallo khal-khal galiya amaanka degaanada labadaas gobol, si ay ugu andacoodan in aan doorasho hadda ka dhici karin degaanada Puntland iyo Jubaland.
Wararku waxay sheegayaan in Deni uu aaday Imaaraatka si uu u soo helo hub iyo dhaqaale lagu fuliyo qorshaha dagaalka. Hubka Imaaraatka ayaa mar hore laga soo dejiyay gobollada Puntland iyo Galmudug.
Sidoo kale, ka dib shirkii Muqdisho, Axmed Madobe wuxuu ilaa iyo hadda joogaa Nairobi, halkaas oo uu isna ka helay ciidan gaaraya 1,200 oo Soomaali ah kuwaas oo Keyna hore u tababartay, una diyaarisay hubkii ay ku dagaal gali lahaayeen. Ciidankaan ayaa hadda ku sugan yihiin degaanada Dhooblay, Ceel Waaq ilaa Beled Xaawo halkaas oo ay ku sugayaan amarkii ay weerarka ku qaadi lahaayeen.
Lama oga heerka uu gaarsiisan yahay itaalka iyo diyaar garowga ciidanka dawladda Soomaaliya ee jooga gobolka Gedo.
Inkasta oo qaabka iyo waqtiga doorashada ay mar hore ku heshiiyeen, haddana Axmed Madobe wuxuu sheegay inaan doorasho ka dhici doonin Gedo ilaa iyo inta ciidanka dawladda dhexe joogo gobolkaas. Ballan ka baxa Axmed Madobe wuxuu keenaya khilaaf uu rabo inuu ku hakiyo doorashada ilaa inta uu xoog ugu qabsanayo gobolka Gedo.
Dagaalka ay abaabulayaan Puntland iyo Jubaland iyagoo kaashanaya dawlado shisheeye oo cadow u ah Soomaaliya ayaa mar kale Soomaaliya ka abuuri kara cawaaqib xumo wayn, dil, dhac, kufsi, qixid iyo barokac hor leh, iyadoo ujeedada Deni iyo Madobe ay tahay sidaan anagu rabno haddii aanan helin waddanku ha bur-buro.
Puntland, Jubaland, mucaaradka Soomaaliya, iyo dawladaha shisheeya ee taageera waxay ku wada qanceen in sida keliya oo ay isku diyaarin karaan, ka dibna tartan adag ula gali lahaayeen Farmaajo ay tahay dagaal, amaan darro, iyo khal-kahl siyaasadeed la galiyo gobollada ay ka taliyaa si hakad loo galiyo doorashadu inay ku dhacdo waqtigeeda iyo qaabkii lagu wadajirka loogu heshiiyay.
Waa ayaan darro in Deni, Madobe, iyo mucaaradku ay garab iyo gaashaan ka dhigtaan dawlado cadow u ah Soomaaliya oo raba inaysan Soomaaliya waligeed yeelan dawlad awood leh oo dalka iyo dadka midaysa
baajinta doorashada Soomaaliya